Nanivana ny sary voalohany an'ny Galaxy Watch Active 2 | Androidsis
Nandritra ny herinandro maro dia maro ny fivoahanay momba ny Galaxy Watch Active 2. Ho an'io taranaka faharoa amin'ny famantaranandrony io dia hampiditra fiasa sasany i Samsung ny Apple Watch dia nalaza, satria azo atao ny mahalala manao andro vitsivitsy. Afaka andro vitsivitsy dia ho fantatsika ny famantaranandro, nanomboka Hotontosaina amin'ny 5 ny famelabelarany Aogositra, araka ny nohamafisin'ny marika Koreana sahady.
Ny voalohany dia voasivana ankehitriny sary ofisialy an'ity Galaxy Watch Active 2 an'ny marika Koreana. Misaotra azy ireo isika afaka mahita ny volavolan'ity taranaka faharoa ity. Ny mazava dia hitovy amin'ny voalohany.
Andininy hafa azontsika jerena amin'ity tranga ity dia ny Samsung handeha manipy amin'ny fehy misy loko maro. Zavatra efa nandrasana sy nitranga tamin'ny taranaka voalohany izany. Amin'ity tranga ity dia averimberina izany, miaraka amin'ny maodely misy loko isan-karazany, koa ny sphere, araka ny hitanao. Amin'izany fomba izany, ny Galaxy Watch Active 2 dia hahaliana kokoa an'ireo karazana mpampiasa rehetra.
Azontsika atao ihany koa ny mahita fa ny sisiny eo amin'ny sehatry ny sehatra amin'ity tranga ity dia hihamalefaka, izay azo antoka fa mihevitra fa somary lehibe kokoa ny efijery amin'ity tranga ity. Toy ny mahazatra ao Samsung, ny marika Koreana dia hampiasa ny Tizen OS amin'ny fiambenana toy ny rafitra fikirakiranao serial.
Amin'izao fotoana izao dia tsy misy aseho momba ny mety hoe tonga amin'ny habe isan-karazany io Galaxy Watch Active 2 io. Voaresaka herinandro lasa izay fa izany no izy, fa amin'izao fotoana izao dia tsy mahafantatra bebe kokoa. Ao amin'ny sary no ahitantsika izay toa habe tokana. Na dia mety hisy roa aza amin'ny farany.
Antenaina ihany koa fa hisy ny variant miaraka amin'ny fifandraisana 4G LTE. Hisy koa ny kinova amin'ny famantaranandro Novolavolaina tamin'ny sonia Under Armour. Azontsika atao koa ny manantena ny fiovana isan-karazany amin'ity Galaxy Watch Active 2 avy amin'ny marika Koreana ity. Famantaranandro iray izay manome toky fa hanome zavatra betsaka horesahina eny an-tsena. Ny alatsinainy ho avy izao no hihaonantsika aminy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Saripika tafaporitsaka an'ny Galaxy Watch Active 2 alohan'ny fampisehoana azy
Ny Pocophone F2 dia hanana endrika vaovao